Iingcebiso ezihlaziyiweyo kunye neTricks ukusuka kwi-Semalt On Indlela yokuKhenxisa i-Spam Spam kwi-Google Analytics yakho
I-spam yokubhekiselela ibhekisele ekutyelelweni okubanjelwe kwiwebhusayithi yakho ngabagaxekisi ngenjongo yokuphucula ukuphuculwa kweenjini. U-Ivan Konovalov, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yomThengi, uchaza ukuba i-spam skews I-Google Analytics idatha kunye neengxelo, okwenze kube nzima kubathengisi ukuba bahlalutye iziphumo baze benze izigqibo zoshishino.
Ukuqonda ugaxekile othunyelwayo
Abanye abaphathi bewebhu bajongene nocelomngeni ukuba baqonde ukuba ugaxekile othungayo uthintela amaninzi kwaye kutheni kubaluleke kakhulu ukususa i-spam yokuthumela i-Google Analytics. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ezininzi iiwebhusayithi kunye ne-akhawunti yeGoogle Analytics zithintekile ngomoya ogaxekile. Kungenxa yoko, ukuba ufumene i-spike kwisithuthi kwiwebhusayithi yakho evela kwamanye amasayithi, lixesha elifanelekileyo lokuthatha isenzo - high pr link juice. Kwiimeko ezininzi, ii-akhawunti ezichaphazelekayo nge-spam yokudlulisa zibonisa ngokukhawuleza kwixesha lexesha leseshoni kunye nezinga eliphezulu lokuhlawula.
Kutheni abahlaseli bathumela i-spam yokudlulisela kwi-akhawunti yakho ye-GA
Ukuphucula i-SEO rankings
Ngokupapasha iinombolo zefowuni yakho yokuthumela, uvala ukuxhomekeka kwi-website yezinto ezinobungozi be-spammers. Njengoko iinjongo zokukhangela zikhwela iwebhusayithi yakho ukuba ilandise, ikwaqwalasela ikhonkco kwiziko lakho njengexabiso eliphezulu. Ukuqhagamshelana nokuthandwa yiyona nto ibalulekileyo eqwalaselwa yiijini zokukhangela. I-backlink isebenza ngokuxhamla kwi-spammers, apho iphela iphakanyiswa khona kwindawo ephezulu kwi-algorithms.
Ukuthatha ingqalelo kwiindwendwe ezinokubakho kwiindwendwe
Ukuchofoza iinqununu ezithunyelwe kuwe, abagaxekile banokukhawuleza ukutshabalalisa usuku lwakho, njengoko izixhumanisi ze-spammy ziqulethe i-malware kunye neentengiso. Kwiimeko ezininzi, abagaxekile bahambisa iindwendwe kwiiwebhusayithi ezinobungozi ngenhloso yokuthengisa iimveliso kunye neenkonzo.
Indlela i-spam yokudlulisa ichaphazela njani i-akhawunti yakho ye-GA
Ukutyelela iindwendwe zibuhlungu kakhulu kwaye zibacaphukisa. Ukutyelela kukuphazamisa iingxelo zakho ze-Google Analytics kodwa kungekhona ngewebhusayithi yakho. Ugaxekile wokudlulisa usebenza kuphela kwi-spammers 'benefit. Njengoko i-imeyli yogaxekile, i-spam yolwazi idla ixesha elide xa isebenza ngendlela yokuyikhusela isigxina.
Ukukhutshwa koMgca woLuntu
1. Ukusebenzisa iifayile ukususa i-spam yokudlulisela kwi-akhawunti yakho ye-GA
Ukuphelisa ukuthunyelwa kogaxekile kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics kubeka izinga eliphezulu lokulinda nokuziqonda kwezobuchwepheshe;
Hlaziya ingxelo yokuthumela ingxelo yeakhawunti yakho kwaye wongeze ii-spam kwi-list yakho
Vula i-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye uphelele kwi-'Candelo loLawulo ';
Yenza izihlunu ezintsha. Kule meko, sebenzisa uhlobo olukhethiweyo;
Yenza icebo lokuhlola ukuphepha ukulahlekelwa iziqinisekiso zakho xa ususa ugaxekile kwi-akhawunti yakho;
Hlanganisa izihlomelo ezintsha ngokutsha ukuvimba ugaxekile logaxekile;
2. Ukusebenzisa icandelo lefayile
Ukudala isigaba kukunceda ukucoca ugaxekile oludlulileyo, kunye nokujongana nabaphulaphuli bakho ngokuzithemba kwaye ulinganise imithombo yakho yendlela. Xa udala isigaba sakho, ungalibali ukuyibiza ukuze uzuze iziphumo ezipholileyo.
3. Ukusebenzisa igama lomninimzi kunye nefayile ye -htaccess
Sebenzisa izihlomelo zegama lomncedisi kunye nefayile yokucwangcisa .htaccess ukususa i-spam yokuthumela i-data yakho kwi-akhawunti yakho ye-GA. Iifayili kunye neeplagi zokuvimba i-spam kwi-akhawunti ekuboniseni i-akhawunti yakho kwixesha elizayo. Nangona kunjalo, ukusebenzisa i-fakthi yefayile yefayile ikhuthazwa kubathengisi ngezakhono zobugcisa ezifanelekileyo. Ukusebenzisa inkqubo ngokungalunganga kunokuphelisa ukuwa kwesiza sakho.
I-spam yokudlulisa isebenze kwi-skewing kunye ne-Google Analytics yedata yakho kunye nokuhamba kweendlela ezihamba phambili kwindawo yakho. Iifayile zenkomfa, amaqela, kunye nefayili ye -htaccess inceda ukufeza idatha echanekileyo kwi-akhawunti yakho ye-GA. Sebenzisa izicatshulwa ezikhankanywe apha ngasentla ukufumana amanani aluthembekileyo kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics.